Fianjerana moto tetsy Namontana :: Zandary iray namoy ny ainy, iray hafa tsy mahatsiaro tena • AoRaha
Fianjerana moto tetsy Namontana Zandary iray namoy ny ainy, iray hafa tsy mahatsiaro tena
Tra-doza ireo zandary roa nanao taingin-droa tamin’ ny môtô, teny Namontana, afak’omaly alina. Voa mafy tany amin’ny lohany ny iray ka namoy ny ainy teo no ho eo. Miady amin’ny fahafa­tesana eny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andria­navalona kosa ilay zandary faharoa hatramin’ny omaly hariva. Avy niasa nikasa hamonjy fodiana izy roa lahy ireo, araka ny fanazavana azo avy amin’ny fibaikoana ny Zandarimaria.
“Miasa eny amin’ny hopitaly Soavinandriana ireo zandary roa ireo. Handeha hody izy ireo tamin’io foto­ana nandeha môtô. Rehefa tonga teo Namontana, tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany alina dia niharan-doza. Niala lavaka ilay môtô no nifatratra tany ambany kamiao nija­nona. Nisy fahaverezan-dra tany anaty lohan’ilay zandary Kilasy prinsipaly kilasy ambony ka nitarika tamin’ny fahafatesany, araka ny nola­zain’ny mpitsabo taminay”, hoy hatrany ny loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimaria.
Ao anatin’ny ady amin’ny fahafatesana kosa ny zandary Kilasy voalohany iray niaraka taminy. Maratra mafy izy no sady tsy mbola mahatsiaro tena ao amin’ny efitra fame­loman’aina ao amin’ny Hjra, araka ny fantatra. Misy fanadihadiana ataon’ny
zandarimaria eny Betongolo momba ity tranga ity.
Fitrandrahana an-tsokosoko :: Tra-tehaka ny vatosoa an-jatony kilao maro
Voina tetsy Ankorondrano Andrefana :: Zazavavikely matin’ny kamiao teny an-dalana ho any am-pianarana